Maamulida Shaqaalaha Iyo Kheyraadka – ‘Human Resource Management’ | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so, April 5, 2018
Ma Rabtaa Tallooyin Iyo Xikmado?
Maxamed Juxa, May 6, 2017
Muzamil Cabdi Cusmaan — September 14, 2018
Maamulida dadka iyo qayraadkooda waa muhiim si loo gaaro hadafka ururka, waxa la rabo in la maamulo waa urur sidaa darteed waa muhiim in aan ogaano waxa lagu qeexo urur.
Urur waxaa lagu qeexaa ‘dad tiro ah oo leh masuuliyado kala duwan, isuna yimid si loo gaaro hadafka u degsan ururka. Markii la eegayo qaab dhismeed waliba oo urur waxa uu leeyahay Maamul sare; waa shaqsiga masuulka ka ah dhameynta howlaha iyo gaarista hadafka ururka, sidoo kale waxa uu maamulaa dadka ka shaqeeya ururka.
Inta badan, waxaa laysku raacay maamulida urur in ay ka kooban tahay shan shaqo oo muhiim u ah urur waliba waxaana kamid ah; qorshayn, isku-duwid, shaqaalaysiin, hogaamin iyo kontoroolid. Dhamaan shantaas shaqo waxaa laysla yiraahdaa hanaanka wax maamulida. Waxaana mid waliba u dul istaagi doonaa si gaar ah.
1. Qorshayn: qorsheyntu waa qorista iyo dejinta hadafyada ururka iyo qaabka loo marayey si loogaaro hadafka ururka.
2. Isku-duwid: isu-duwidu waa kala qaybinta shaqada iyo shaqaalaha, iyadoo la sameynayo qaab ay isku xiraya oo ay ku kala warqaataan dhamaan koox waliba oo isu shaqo ah.
3. Shaqaaleysiin: maamulaha waxa uu sidoo kale qayb ka qaataa nuuca shaqaalaha uu ururka u baahanyahay in uu shaqaalaysiiyo iyo hanaanka loo qaadanayo shaqaalaha, doorashada shaqaalaha, tababarida iyo hormarinta shaqaalaha, qiimeynta shaqaalaha iyo magdhaw siinta shaqaalaha.
4. Hogaamin: maamulaha waa in uu shaqaalaha ku hogaamiyaa qabashada shaqaalaha, niyaddanau dhisaa asagoo siinaya wax yaabo dhiira gelin u sameynaya shaqaalaha.
4. Kontoroolid: maamulaha waa in uu u kuura galaa, asagoo qiimeynayo shaqada la qabatay iyo sida loo rabay in loo qabto, kadibna sameeyaa xisitaan waxii la qalday.
Maadaama, aan ka hadleyno maaddadan oo ah Maamulida Dadka iyo Kheyraad, waxaa muhiim ah in aan qeexno maadada waxa ay tahay?
Maamulida dadka iyo kheyraadka waa hanaanka loo kasbado, loo tababaro, loo qiimeeyo magdhawna loosiiyo shaqaalaha, xiriirka shaqaalaha, caafimaadkooda, badbaadada goobaha ay ka shaqeyaan, u cadaalad falida shaqaalaha iyo xalinta cabashooyinkooda.
Sidaa awgeed, maamulaha waxaa muhiim ah in in loo dhinacyo badan wax ka eego, qiimeyn badana uu ku sameeyo shaqaalahiisa dhinacyada uu qiimeynta ka sameynayo waxaa kamid ah.
– Dabeecadaha dabiiciga ah ee shaqaalihiisa iyo qaabka ay u dhaqmayaan.
– Qorsheynta baahida loo qabo shaqaalo iyo in la shaqaleysiiyo shaqaalo.
– kala doorashada musharaxiinta soo codsaday shaqada
– Wacyigelin iyo tababar u sameynta shaqaalaha ku cusub ururka.
– Dhiira gelin iyo waxyaabaha faaido u leh xirfada shaqaalaha korna u qaadaya.
– Abuurida xiriir wanaagsan, dhamaan xubanaha ururka
– tababaridda, hormarinta maamulayaasha
– Dhisidda kartida shaqaalaha ay ku qaban karaan shaqada laga rabo.
Dhamaan waxaa oo idil, waa waxa muhiimka u ah in uu ogaado qofka maamulaya ururka, sidoo kale waxaa muhiim ah in qofka maamulka ah uu ka warhayo, hadii kalana caqabad ku noqon doono geedi usucodka shaqalada iyo shaqaalaha taas oo saameyn.
Tags: Maamulida Shaqaalaha Iyo Kheyraadka - Human Resource Management
Next post Waa Maxay Jaceyl?
Previous post Dabeecadaha Ururada 'Organizational Behavior'
About the Author Muzamil Cabdi Cusmaan
Waa qoraa ka tirsan Afrikaan. Waa qoraa wax ku qora afka Hodonka ah ee Soomaaliga. Waxa uu wax ka qoraa arrimaha siyaasada ee mandiqada geeska Afrika iyo gudaha dalka, dhaqaalaha, amniga iyo arrimaha Bulshada. Wuxuuna taqasus u leeyahay culuumta siyaasadda, maamulka iyo Dhaqaalaha, Wuxuuna haystaa shahaadooyinka heerka koowaad ee kala ah Maamulka iyo Maareynta Dhaqaalaha iyo Amniga. Haatana waxa uu daraaso ka samynayaa maamulka istraatiijiyada heerka labaad ee jaamacada.
January 14, 2019 at 10:10 pm	— Reply
ka hor qoraalkan wax fikrad ah kama haysan madadaan .
hadase waan fahan sanahay .
Thanks walaal .